Beginner Snowboard Lesson in Tahoe City - Airbnb
Tahoe CA, United States
Izinto onokuzonwabela ezifanayo
Guqulela eli phepha kwisiisiXhosa
Isamisiwe de kube ngoJuni 14. Ukuze intsapho yethu ikhuseleke, Izinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb zisamisiwe kwiingingqi ezininzi ngenxa yeCOVID-19. Yiya Kwiziko Loncedo ukuze ufumane inkcazelo yakutshanje ngaphambi kokuba ubhukishe.
Ukuya kutsho kubantu abayi- 4
Into oza kuyenza
Umbuki zindwendwe wakho
Izinto ezithethwe lundwendwe
Icandelo lokujonga izimvo
Uza kube uphi
Izinto ezenziwa phandle zisenokuba nobungozi, kwaye unokufumana iimeko eziyingozi kule nto enokonwatyelwa. Qiniseka ukuba ungathatha inxaxheba ngokukhuselekileyo xa ujonga ubuchule bakho kunye neemeko (ezinjengendawo, imozulu kunye nezixhobo).
Izinto omele ungazilibali
Nayiphi na into enokonwatyelwa ingarhoxiswa uze uyibuyiselwe yonke imali yakho kwiiyure eziyi-24 zokubhukisha kwakho, okanye ubuncinci kwiintsuku eziyi-7 ngaphambi kokuba loo nto enokonwatyelwa iqale.
Sebenzisa u-Airbnb qho xa uqhagamshelana. Ukuze ukhusele ukubhatala kwakho, ungaze uthumele imali okanye uthethe nabantu ungasebenzisi iwebhsayithi okanye i-app yakwa-Airbnb.
Izinto ezifunwa kundwendwe
Kungaya ukuya kutsho kwiindwendwe eziyi- 4 ezineminyaka eyi- 8 nangaphezulu. For young children, we do not have a firm minimum age requirement to do lessons, but we do require private lessons for childrin under 8. To book a privae lesson you can either…
Izinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb ziqinisekisiwe umgangatho wazo
Fumana iincutshe zasekuhlaleni
Yenziwa ngabantu basekuhlaleni abayithandayo indawo yabo kunye nento abayenzayo.
Ngokuba namaqela amancinci asondeleleneyo, soze ulahleke ngokuba phakathi kwabantu abaninzi.
Nto nganye enokonwatyelwa iyahlolwa ukuze kubonwe ukukhetheka kwayo.
Khetha ulwimiisiXhosa$Khetha uhlobo lwemaliUSD